बैशाख २७, २०७५ पत्रपत्रिका
तस्बिर श्रोत : नेपाल प्रहरीको फेसबुक पेज
काठमाडौं । सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई सुरक्षासम्बन्धी काममा खटाउन राज्यले प्रतिव्यक्ति आठदेखि १० लाखसम्म अतिरिक्त लगानी गरी तालिम दिन्छ, दक्ष बनाउँछ ।
तर, तीमध्ये सानो दर्जाका अधिकांश सुरक्षाकर्मी खटिन्छन् कहाँ रु हाकिमकहाँ– घरायसी काम । यो खबर जन आस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ।
बाँचेका हाकिमले त लिए–लिए, मरेका हाकिमकहाँ पनि बाँकी राखिएको छैन, सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदारको रूपमा प्रयोग गर्न ।
०५९ माघ १२ गते बिहान ललितपुरको बागडोलमा माओवादीद्वारा मारिएका सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठ कहाँ अहिले पनि ६ जना कर्मचारी सुरक्षाको नाममा खटाइएका छन् ।
यही वैशाख १९ गते गृहलाई सशस्त्र मुख्यालयले नै दिएको विवणमा लेखिएको छ संख्या ।
०६३ वैशाख २९ गते अवकास पाएका महानिरीक्षक सहवीर थापाको ०६७ जेठ ४ गते क्यान्सर रोगका कारण ५९ वर्षको उमेरमा निधन भयो ।
तर, अहिलेसम्म पनि उनको कुलेश्वरस्थित घरमा तीनजना सशस्त्र प्रहरी खटाइएका छन् ।
यीबाहेक बासुदेव वलीकहाँ तीन, सनत बस्नेतकहाँ पाँच, किशोर लामाकहाँ ६, शैलेन्द्र श्रेष्ठकहाँ ६, कोषराज वन्तकहाँ पाँच, दुर्जकुमार राईकहाँ पाँच र भर्खरै रिटायर्ड भएका सिंहबहादुर श्रेष्ठकहाँ चार सशस्त्र प्रहरी सुरक्षाको नाममा खटाइएका छन् ।
यी त महानिरीक्षक, अर्थात् संगठन प्रमुख भएर रिटायर्ड भएका कारण मानका खातिर सुरक्षा दिइयो भनेर चित्त बुझाउन सकिएला ।
तर, नेपाल प्रहरीको बिजोग अर्कै छ ।
अहिले पनि गृहसचिवबाट रिटायर्ड भएका सबैजसो हाकिमकहाँ नेपाल प्रहरीका कामदार राखिएका छन् ।
गृहमा पचास जना सवारी चालक छन्, तर हाकिमलाई ती चालकले हुँदैन, प्रहरी नै चाहिन्छ ।
कारण हो, प्रहरी भए सलाम ठोक्छ ।
घरमा पुछपाछदेखि सरसफाईसम्ममा सघाउँछ ।
प्रहरीको लोभ हो, गृहका हाकिमले भनेपछि सानो मिसन पक्का १ फलतः त्यहाँका केही ड्राइभर मन्त्रालयपछाडिको ग्यारेजमा दिनभर तास खेलेर जागिर पकाउँछन् ।
लोकमानको रजगज चल्दा अख्तियारबाटै रिटायर्ड भएका र त्यहीँ विज्ञको नियुक्ति पनि पाएका एसपी भरत शर्मासँग अहिले पनि दुई जना प्रहरी आफूसँग र छोरी–ज्वाइँको स्याहारका लागि अर्का दुई जना प्रहरी छन् ।
अरुले छोरीलाई दाइजोमा अर्थोकै दिन्छन्, यिनले चाहिँ ‘आपका जाएगा, न बापका जाएगा’ भन्दै दुई सिपाही पठाइदिए ।
उनकी साली छिन्, सई अञ्जना । बस्ने उनको घरमा, हाजिर गर्ने अख्तियारमा ।
अख्तियारमा हाजिर गरेबापत ९९ प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता पाइन्छ ।
अहिले अख्तियार दरबन्दी भएर हाकिमकहाँ कामदार राखिएका झण्डै ३० जना प्रहरीको रेकर्ड हेडक्वार्टरले उतारेको छ ।
रिटायर्ड आइजीजति सबैकहाँ तीनदेखि १० जनासम्म प्रहरी छन् ।
त्यसमध्ये ओमविक्रम राणा सदरखोर डिल्लीबजारमा सुशीला कार्कीको प्रतापले कैद सजायँ भुक्तान गरिरहेका छन् ।
तर, उनको घरमा सात जना प्रहरी कामदारको रूपमा राखिएका छन् ।
नेपाल प्रहरीका त भूपूडिएसपीसम्मले कामदार राख्न भ्याएका छन् ।
एआइजीबाट रिटायर्ड भएका पशुपति उपाध्यायसँग एकजना ड्राइभर, एक जवान र एक परिचर छन् ।
एसएसपीबाट रिटायर्ड भएका लव बिष्ट, कृष्ण गौतमहरुले पनि घरायसी काममा प्रहरी कर्मचारीलाई लगाएका छन् ।
राजेन्द्रसिंह भण्डारी, कल्याण तिम्सिना, नवराज ढकाल, नरेश गुरुङ, मदन खड्काहरुले पनि एकजना ड्राइभर र परिचर राखेका छन् ।
आइजीबाट रिटायर्ड भएका रमेश चन्द ठकुरी फरार सूचीमा छन् ।
तर, उनको घरमा पनि तीन जना प्रहरी खटिएको अभिलेख हेडक्वार्टरको एमटी र सुरक्षा सेवा निर्देशनालयमा छ ।
सुडान घोटाला प्रकरणमा उनीभन्दा अघिका महानिरीक्षकमध्ये हेमबहादुर गुरुङले कैद सजायँ भुक्तान गरिसके ।
उनी कैद सजायँमा छँदा पनि घरमा सुरक्षाकर्मी थिए ।
खाउञ्जेल जागिरबापत तलब खाने, सकिएपछि पेन्सन खानेसम्म त स्वाभाविक हो ।
तर, बहालमा रहेकैजस्तो सुविधा पनि लिने चलनले सबभन्दा बढी विकृति नेपाल प्रहरीमै मौलाएको छ ।
जागिर सकिएपछि अधिकांश हाकिम व्यापार व्यवसायमा लाग्छन् ।
तिनले त्यत्तिका पैसा कहाँबाट कमाएर लगानी गरेका हुन् रु राज्यले यो खोज्दैन ।
जस्तो कि, रमेश चन्द ०७२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त धापासीस्थित हिमालयन होराइजन अपार्टमेन्टका सिइओ थिए ।
तर, ‘फरार हुनुपर्ने’ भएपछि अहिले सार्वजनिक जीवनमा देखिएका छैनन् ।
पोहोर रिटायर्ड भएका एआइजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ मारवाडी अशोक अग्रवालहरुका पार्टनर छन् ।
त्यही समूहको व्यापारिक फर्म सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि आबद्ध छन् ।
उनीसँग पनि तीनजना घरेलु कामदार छन्, प्रहरीका । उनकै व्याची रमेशशेखर बज्राचार्य विनोद चौधरीकोमा उपाध्यक्ष बनाइएका छन् ।
न्यायाधीश र कर मामिला मिलाएर बसेका छन् । एउटा व्यापारिक फर्मले बिना लगानी कसैलाई पनि उपाध्यक्षजस्तो पद दिँदैन, त्यो पनि चौधरीजस्ता चुइँयाले । उनीसँग तीनजना प्रहरी साथमा छन् ।
भूपू एआइजी राजेन्द्रबहादुर सिंह नर्भिक अस्पतालमा मिहिनेतको काम गर्द छन्, सिइओका रुपमा ।
तर, जागिरभर टन्न पैसा कमाएका अधिकांश प्रहरी व्यापारिक फर्मको साझेदार नै भएका छन् ।
पेन्सन खाने, सुविधा लिने र व्यक्तिगत व्यापार, व्यवसाय पनि चलाउने । यस्तो स्वर्ग अन्त मिलोस् कसरी ?
एआइजीबाटै रिटायर्ड भएका किरण गौतम मोरङ अटो वक्र्सले बजार प्रबद्र्धन गर्ने यामाहा ब्राण्डका गाडीको व्यापारमा छन् ।
बरु, केशव अधिकारीले अवकाशपछि केही काम नपाएर दाजुभाइले सम्हालेको पुख्र्यौली चिया उत्पादनको काम जिम्मा लिएका छन् ।
डिआइजीबाट रिटायर्ड हेमन्त मल्लले हेडक्वार्टरले पठाएका परिचर फिर्ता गरेका छन् ।
१५ हजार पेन्सनले खान पुग्छ उनलाई । एआइजीबाट रिटायर्ड भएका गंगा पाण्डे ल फर्म खोलेर कानुनी अभ्यासमा छन् ।
घरमा सहयोगीका रुपमा सिपाही राखेका छन्, गाडी पनि उनैले चलाउँछन् ।
एआइजीबाट रिटायर्ड प्रताप थापासँग पनि तीनजना कामदार प्रहरी छन् ।
राज्यको तलब खाने कर्मचारीलाई जुन प्रयोजनका लागि भर्ना गरिएको हो, त्यसबाहेकको ड्युटी लगाउन पाइँदैन ।
पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसम्मलाई निश्चित सेवा सुविधा दिने गरी मस्यौदा गरेको छ ।
तर, प्रहरीमै जागिर खाएर रिटायर्ड भएका हाकिमलाई घरेलु कामदारका रुपमा सिपाही खटाउने व्यवस्था कुनै पनि ऐन, कानुनले गरेको छैन ।
अझ विधेयकको आठौँ दफामा त स्पष्ट उल्लेख छ कि, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने गरी निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भई सार्वजनिक पदमा बहाल रहेसम्म सुविधा पाइँदैन ।
त्यस्तै, महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदबाट मुक्त भएमा, नैतिक पतन, फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा सुविधा नपाउने उल्लेख छ ।
‘पहिला जे भयो, भयो, अब त्यस्तो चल्दैन’, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले बहाली भएयता पटक–पटक पिसिसी बैठकमा दोहोर्याउने गरेको शब्द हो यो ।
अर्थात्, भूपू र सिभिलियनकहाँ घरेलु कामदारका रुपमा खटाइएका प्रहरी कर्मचारीलाई एक महिनाभित्र फिर्ता ल्याउन सुरक्षा सेवा निर्देशनालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
सँगै, वर्षौंदेखि हेडक्वार्टरमा रजगज चलाउँदै आएका तल्लो दर्जाका प्रहरीलाई लखेट्ने काम पनि शुरु गरेका छन् ।
अहिले पनि हेडक्वार्टरका संवेदनशील निकायमा अच्युतकृष्ण खरेलको पालादेखिका मानिसहरु बसिरहेका छन् ।
जस्तो कि, सिपाहीमा जागिर खाँदा कप्रमा काम बसेका धिताल सई भइसके, त्यहीँ छन् ।
प्रबन्ध शाखामा चौलागाइँ थरका असई छन्, सिपाहीदेखि नै त्यहाँ बसेका ।
कुनै दिन तपाईंले एक नम्बर गण अगाडिको रेस्टुरेण्टमा केही ठेकेदार भेट्नुभयो भने पक्का मान्नुस् कि, चौलागाईंलाई पैसा बुझाएर उनीहरु कुनै काम लिन खोज्दैछन् ।
कानुनमा इन्स्पेक्टर छन्, राई थरका । यिनी पनि जागिर खाएदेखि अन्त गएका छैनन् ।
कार्यविभागमा सई खड्का छन्, हवल्दारदेखि बसेका ।
बजेट शाखामा वर्षौंदेखि बसेका एक एसपी र एक डिएसपी छन्, हटाउन खोज्ने आइजीलाई उल्टै ‘ख्याल गरिबक्सेला श्रीमान्, समय खराब छ’ भन्दै सभ्य भाषामा धम्क्याउने, कहाँबाट के चुहाउँदा आइजीको चुकुल फुस्किन्छ भन्ने कुराका यी दुई भाइ विज्ञ मानिन्छन् ।
प्रहरीको पेट्रोल पम्पमा खुलेदेखि अहिलेसम्म एउटै अनुहारका मान्छे बस्छन् ।
त्यहाँ अरु जान सक्दैनन्, गइहालेछन् भने ६ देखि ७ महिनाभन्दा टिक्न दिँदैनन् ।
आइजी सर्वेन्द्रले यी सबै विवरण उतारेर ‘स्वीप’ गर्ने तयारी थालेको बताइन्छ ।
प्रकाशित : बिहिबार, बैशाख २७, २०७५१३:४८
मोदीले नेपाली सुरक्षा निकायप्रति किन यतिधेरै अविश्वास गरे ? ओली निरिह जस्तै देखिए
खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण अब ‘ठाउँको ठाउँ’ हुने
कामचोर ठेकेदार कम्पनी पप्पुले पाउने भयो फेरि नयाँ ठेक्का
पूर्वसचिवलाई प्रदेश प्रमुख नबनाउने, यी हुन सम्भावित नाम
पाकेटमारको रोचक तथ्य : पकेटमारीको पैसा विदेशीसँग यौनप्यास मेटाउन खर्च